Umzi-mveliso wonyango |Abavelisi boNyango baseTshayina kunye nababoneleli
Isalon sebenzisa umatshini wobuhle Co2 i-oxygen rf ultrasound ukuvuselelwa kwesikhumba kunye ne-exfoliation infusion izixhobo zobuso
I-O2tofacial Therapy iphefumlela umoya ovela kwiatmosfera ngokusebenzisa i-oxygen ion generator ukuvelisa ioksijini esulungekileyo kwaye malunga nezigidi ezi-3.
yinkqubo yolawulo ekhulisa amandla
I-Magic Mirror Max (M9) yingqokelela ye-electronics, umatshini ochanekileyo, i-optics edibeneyo kunye nomfanekiso wedijithali kwesinye sesixhobo sokubona ulusu oluphezulu.Nge-RGB, i-UV kunye ne-PL ye-imaging ye-spectral kunye ne-teknoloji yokuhlalutya umfanekiso, thatha inkcazo ephezulu yomfanekiso wobuchwephesha, ukusebenzisana nohlalutyo olukhulu lwedatha kunye nomsebenzi wokufunda nzulu wedatha, i-Smart Magic Mirror inokusetyenziselwa ukuchongwa kobuchwephesha kunye nohlalutyo lwesayensi kwiingxaki ezili-10 ze-epidermis kunye ne-dermis.
Isixhobo se-Aquafacial sokususwa kwe-acne kunye nokususwa kwentloko emnyama
Olutsha olu-6 kumatshini o-1 wokhathalelo lwesikhumba lobuso usebenzisa i-h2 o2 ijeneretha yenza amanzi acociweyo abe yihydrogen kunye neoksijini ion yamanzi, umphezulu wolusu unokuvelisa iimolekyuli ze-H2, ukuze iiseli zemolekyuli zamanzi zikwazi ukungena ngokukhawuleza kwidermis.Ukuze ufezekise umphumo wokuvuselela ulusu kunye nokumhlophe, kukunika ubuso obutsha!
Ngokwenza i-vacuum yokufunxa, amaqamza omoya amancinci axutywa kunye ne-nutritive medium, ngokusebenzisa incam eyilwe ngokukodwa i-spiral esebenza ngokuthe ngqo eluswini, enokugcina amaqamza amancinci achukumisa ulusu ixesha elide, axovule kwaye ahlikihle iiseli ezifileyo kumaleko olusu angaphandle. .Ngokufunxa i-vacuum, amaqamza amancinci anokususa nabuphi na ubumdaka kunye namasuntswana ulusu olufileyo amabala, amabala, abonelele ngesondlo esihlala sihleli eluswini, enze ulusu lube nokufuma ngakumbi kunye nonyango olululo oluthandwa kakhulu kwi-beauty salon.
I-FDA kunye ne-TUV yezoNyango ze-CE zamkele iFractional CO2 laser yokususwa kwamaqhakuva kunye nokuphinda kufakwe ulusu
I-9 in1 i-Hydro Facial Diamond Peel yokususa i-acne Machine
Umatshini wobuso we-Hydro osebenzayo usebenzisa imowudi yokufunxa i-vacuum elawulwa yinkqubo yobukrelekrele, ngokudityaniswa kweemveliso kunye nezixhobo, ukucoca ngokunzulu ulusu kunye ne-pores off horny, i-acne, i-blackheads kunye nobunye ukungcola ngexesha elifutshane kakhulu.Kwaye uphucule ukufunxwa nzulu kweemveliso zesondlo, ukhuthaze ukuqiniswa kwama-pores, ulusu olugudileyo, ukonyusa ukufuma kwesikhumba, kwaye wenze ulusu lwakho lube mhlophe, lufume kwaye lulunge.
Umfanekiso wobugcisa kwiiklinikhi malunga ne-HydraDermabrasion, i-celebrity-favourite face to achieve nokugcina impilo, iyona kuphela inkqubo edibanisa ukuhlanjululwa, ukukhupha, ukukhupha, ukukhuselwa kunye nokukhusela i-antioxidant yonke enye.Phucula imibimbi, imigca foine, blackheads & namaqhakuva.
Isixhobo esiphathwayo se-SHR IPL sokususa i-acne kunye nokususwa kwe-pigmentation
Ubuchwephesha obuphezulu be-pulse light (IPL) bubonelela ngobude obuhlukeneyo bokukhanya kwizisombululo zonyango ezingaphazamisiyo nezichanekileyo zokufumana ukusebenza okubalulekileyo kunye neerekhodi zeklinikhi ezibanzi.Ukukhanya kunokungena kwi-dermis kwi-tissue ekujoliswe kuyo, eya kutshatyalaliswa kukufudumeza ukukhanya, emva koko kuqweqwe kwaye kukhutshwe umzimba nge-metabolism.
Ukukhanya okukhulu kwepulse (IPL) kudityaniswe netekhnoloji yeRadio Frequency (RF), enokwenza amandla okukhanya abe nzulu phantsi kwe-epidermis, aphule iseli ye-pathological kunye nokuvuselela i-collagen ukuba ikhule, iqonde ulusu olumhlophe kunye ne-elastic ngakumbi ngaphandle kwesiphumo.
Itekhnoloji yePrimiyamu ye-Optimal pulse (OPT) ibonelela ngokulandelelana kunye nemveliso yamandla efanayo, njengemowudi yomnqwazi ogqibeleleyo, ikwabonelela ngenkqubo yonyango ekhuselekileyo nekhawulezayo ngaphandle kwexesha eliphantsi.
Uhlalutyo lwe-Smart Skin isixhobo se-aquafacial sokususwa kwe-acne kunye nolusu lobuso olusempilweni
Inkqubo ekrelekrele yolawulo lwesikhumba somkhenkce kukuqokelela imifanekiso yeenkcukacha zolusu lobuso nge-10 yezigidi ze-pixel echaza udidi oluphezulu lwekhamera edityaniswe netekhnoloji yokucinga ye-spectral, ngokuxilongwa ngobukrelekrele kunye nohlalutyo lwe-injini ye-intelligence core, izinto ezi-8 zokubona izinto ezintle. iingxaki zolusu, kwaye ngokweziphumo zoxilongo lwenkqubo yabucala yokhathalelo lobuhle kunye nengcebiso ekrelekrele yeemveliso zokhathalelo lwesikhumba;Idityaniswe nobuchule be” imela yefosholo ye-ultrasonic “,” iqamza “,” i-ultrasonic wave “,” ifrikhwekhwekhwe yerediyo yegolide “,” ukulungiswa komkhenkce “kunye njalo, imisebenzi yobuhle emithandathu yoqwalaselo oluphezulu ilawula ngokupheleleyo ulusu, idibanise iziphumo ze-AI. Ukuxilongwa kolusu ngeemveliso zokhathalelo lolusu kunye nezinye izinto zokhathalelo lolusu, kunye nokuphuhlisa isixhobo esisebenzayo esisebenzayo sokubona ulusu kunye nolawulo.